Marka sharciga degganaanshaha lagu siiyo - Arbetsförmedlingen
Marka sharciga degganaanshaha lagu siiyo
Haddii dhowaan sharci degganaansho lagugu siiyey qaxootinimo, magangelyo ama qaraabo ahaan, waxaad fursad u heleysaa inaad ka qaybgasho barnaamij meeleyn.
Laakiin waxaad marka hore sameyneysaa
Inaad booqato Xafiiska shaqada
Waxaa muhiim ah inaad sida ugu suurtagalka ah noogu timaaddo kaddib marka aad heshay go’aanka sharciga degganaanshaha. Waxaan markaas go’aamineynnaa haddii aad ka qaybqaadan karto barnaamijka meeleynta. Ha illaawin inaad soo qaadato warqadda go’aanka aad ka heshay Hay’adda Socdaalka. Markaas kaddib ayaa lagu siin karaa lacagta meeleynta oo aad uga qaybqaadan kartaa hawlo lagu gaarayo shaqo ama waxbarasho.
Tag xafiiskaaga shaqada (svenska)
Inaad samaysato lambarka aqoonsiga
La xiriir Hay’adda canshuuraha si laguugu sameeyo lambar aqoonsi. Lambarka aqoonsigu wuxuu muhiim u yahay:
in ay Försäkringskassan kuu siiso lacagta meeleynta
inaad bangi ka furato koonto
inaad dalbato kaarka aqoonsiga
inaad samaysato aqoonsi elektarooni ah
inaad ka qaybqaadato hawlaha barnaamijka meeleynta.
Isu diyaari kulan
Waxaad kulanka u soo qaadaneysaa warqadda go’aanka sharciga degganaanshaha oo aad ka heshay Hay’adda socdaalka. Haddii laguu sameeyey lambarka aqoonsiga, waxaad soo qaadaneysaa warqad aqoonsi ama wax kale oo aad isku caddeyso. Waxaad kaloo soo qaadaneysaa shahaadooyinka iyo caddaymaha shaqooyinkaagii ama waxbarashooyinkaagii hore. Wixii su’aalo ahna sii qoro.
Maxaa kulanka looga hadlayaa?
Marka aan kulanno waxaad nooga sheekeyneysaa shaqooyinkii aad horay u qabatay, waxbarashooyinkii aad soo dhigatay, waxa aad xiiseyso iyo waxa aad jeceshahay inaad mustaqbalka ku shaqayso. Waxaan kaloo ka wadahadli doonnaa sida ay yihiin fursadaha aad uga qaybqaadaneyso hawlaha barnaamijka meeleynta iyadoo la tixgelinayo xaaladdaada qoyska iyo caafimaad. Iyadoo taas lagu salaynayo ayaan isla dejin doonnaa qorshe dhaqdhaqaaqyo kala duwan.
Haddii aadan ahayn qaxooti ama magangelyadoon ama qof qaraabo la ah qof dadkaas ka mid ah waxaan kugu soo dhoweyneynnaa inaad nala soo xiriirto. Waxaan adeeg siinnaa dhammaan dadka sharci ahaan uga shaqayn kara Iswiidhen. Tusaale ahaan waxaad lagaa caawinayaa inaad:
hesho shaqooyinka bannaa
bilowdo barashada afka iswiidhishka
hesho waxbarasho kugu habboon
xirfad tijaabiso si aad u muujiso aqoontaada
wax ka ogaato sida ay tahay in Iswiidhen laga shaqeeyo oo lagu noolaado.
hesho talooyin ku saabsan meelaha dalka oo ay ka jiraan fursad shaqo.
Sida hawlaha barnaamijka meeleyntu u socdaan
Barnaamijka meeleyntu waa caawimaad leh qaab tababar iyo waxbarasho oo loogu talagalay soogalootiga dhowaan yimid. Hadafkuna waa inaad sida ugu dhaqsaha badan ugu barato afka iswiidhishka oo aad shaqo ugu hesho oo adigu masruufkaaga u la soo baxdo.